IINGCAMANGO ZOMBALA WEGARAJI (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Iingcamango zoMbala weGaraji (Isikhokelo sokugqibela)
Iingcamango zoMbala weGaraji (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokugqibela semibono yembala yomnyango wegaraji.Bathi iinkcukacha zenza ikhaya. Kukho inani lezinto ezinceda ukwenza ukubonakala kwendlu ngokubanzi, kwaye icandelo ngalinye linegalelo ekunciphiseni isibheno sangaphandle kwendlu. Ngendlela efanayo, nayiphi na indawo yekhaya ibaluleke ngokulinganayo njengenye, kwaye iingcango zegaraji azikho ngaphandle kuloo nto. Apha ngezantsi siza kugubungela intsingiselo yemibala yeminyango yegaraji, kwaye sibonise imifanekiso yeminyango yegaraji yokukhetha imibala ethandwayo ukunceda ukufumana efanelekileyo kwindlu yakho.
Iingcango zegaraji zithathwa njengenye yezona zinto zinkulu ekhaya. Ukuba yeyona ndlela inkulu yokungena endlwini, ibandakanya phantse isinye kwisithathu sendlu. Nangona iqhele ukungahoywa, yinxalenye ebonakalayo efuna ukucinga ngononophelo kunye nengqwalaselo yoyilo. Yinto ebalulekileyo kwinkangeleko yangaphandle yekhaya kwaye yenza ifuthe lobuhle elinika isibheno ngokubanzi kunye nexabiso lendlu.
Ukukhetha umbala ofanelekileyo kwifayile yakho ye- Uyilo lomnyango wegaraji ibalulekile njengoko ichaphazela isimilo sendlu yakho ngeendlela ezahlukeneyo. Inika isibheno esinqwenelekayo, ibonisa ubuntu bakho kwaye inokwenza indlu yakho ivele kwabanye. Ngale nto, kufuneka sizikhumbule izigqibo zethu ekukhetheni umbala ofanelekileyo kumnyango wegaraji.
Imibala yoMnyango weGaraji
Nguwuphi umbala wokupeyinta umnyango wam wegaraji
Ukukhetha Umbala woMnyango weGaraji
Iingcebiso zokupeyinta iGaraji yeGaraji
Umnyango weBlue Garage
Umnyango weGaraji elibomvu
Umnyango weGrey Grey
Umnyango weGaraji yeGreen
Iminyango yeGaraji emnyama
Umnyango weGaraji eMhlophe
Iminyango yeGaraji eBrown
Iminyango yeGaraji ye-Beige
Umnyango weGaraji yeGrey
Umnyango wegaraji eliorenji
Umnyango wegaraji emfusa
Isango leGaraji leSandstone
Iingcamango zoMnyango weGaraji yeeNdlu zeBrick
Umnyango weGaraji Umbala ofanayo njengeNdlu
Umbala olungileyo uphucula isibheno sekhaya. Iiphalethi zemibala zichaphazela ixabiso lilonke lekhaya, nokuba lilungile okanye alilunganga. Ngaphandle kwezixhobo ezahlukeneyo kunye nokugqitywa, kukho uluhlu olubanzi lweendlela zokukhetha umbala wegaraji onokuwuphonononga ukuze wenze ukubukeka kwekhaya. Eminye imibala yomnyango wegaraji ihambelana nezitayile ezithile zokwakha, ngelixa ezinye zenza umahluko kwaye zongeza into ebonakalayo enomdla.
Itemplate yesimemo somtshato seMicrosoft
Eyona mibala ixhaphakileyo yomnyango wegaraji yintlabathi, ngumkhenkce omhlophe, ilitye lodongwe, itaupe, beige, brown, charcoal grey, grey ethambileyo, mnyama kunye nohlaza mnyama nohlaza okwesibhakabhaka. Ukhetho oluphezulu ezintlanu kukungathathi cala: mhlophe, mpunga opholileyo, umnyama, beige kunye ne-walnut brown. Eminye imibala yesiko efana nemfusa, bomvu, orenji, tyheli nayo iyafumaneka kwimarike.
Kule nqaku, siza kukunceda uphonononge imibono eyahlukeneyo yeminyango yomnyango wegaraji kunye neengcebiso malunga nokuzifanisa neentlobo ezahlukeneyo zangaphandle. Ukuba uyafuna zikhona igaraji ngesoftware Iinkqubo zokukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni wezimvo zakho ngaphambi kokuqesha ikontraka okanye ukuthenga izinto. Funda njengoko sikunceda uthathe isigqibo sokuba ngowuphi owona mnyango mhle wegaraji ekhayeni lakho.
Ukukhetha umbala kumnyango wegaraji akufuni zakhono zobugcisa okanye ulwazi olubanzi kulwakhiwo kunye noyilo. Nangona kunjalo, kuba ucango lwegaraji lubaluleke njengayo nayiphi na indawo yekhaya lakho, ukukhetha umbala ofanelekileyo kuyo kufuna ingcinga enononophelo kunye nengqwalaselo. Akukho lula njengokuncamathela kumbala owuthandayo, njengoko iingcango zegaraji zizinto ezibalulekileyo zokwakha ezibandakanya isinye kwisithathu sendlu yakho.
Kodwa ukhetha njani umbala ofanelekileyo ukupeyinta umnyango wegaraji? Akukho mthetho ungqongqo ngokwenene ekufuneka umntu awuthobele ngokwemiqathango yokukhetha umbala ofanelekileyo kumnyango wegaraji. Uyilo lukwathetha ngokuzibonakalisa kwaye lubonelela ngendawo yokubonisa incasa nokhetho lomntu. Nangona kunjalo, kusekho izikhokelo ezininzi umntu anokuzilandela ukuthintela nakuphi na okungalunganga kuyilo kwaye ugcine indlu yakho ingakhange ibonakale ngathi sisiphithiphithi esibonakalayo.
Kukho iindlela ezahlukeneyo umntu anokuthi azithathe ekukhetheni umbala wegaraji efanelekileyo kwikhaya lakho. Ezi ndlela zisebenzisa ezi zinto zilandelayo: (1) isimbo sendlu yakho, (2) izinto zekhaya lakho, (3) ezinye izinto zokwakha zangaphandle kwekhaya lakho, (4) isimbo sakho kunye (5) nezikimu zemibala ngokusekwe kwivili lombala. Indlela nganye ikuvumela ukuba uze nombala womnyango wegaraji olungele kakuhle ikhaya lakho.
Sebenzisa isitayile sekhaya lakho. Isitayile sendlu yakho yoyilo kunye nemibala yayo sisikhokelo esihle sokubona ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo xa kufikwa kumbala womnyango wegaraji yakho. Uhlobo ngalunye loyilo luhlala luhambelana nombala othile. Amakhaya esiNtu ahlala eneengcango zegaraji ezihlangana nawo wonke umbala wendlu ngelixa indlu ephefumlelweyo yangoku isebenzisa isitayile esikhetheke ngakumbi isebenzisa umbala obanzi ngakumbi. Amakhaya esiNtu akwalungiselelwe ukujongana neepeyinti zombala ezityebileyo zangaphandle kwaye zihlala zinokuphela kokutya okuziinkozo ngomnyango wegaraji. Amakhaya exeshana aya kudweliswa ngelixa izindlu ezincinci zihamba zingathathi cala njengamnyama, ngwevu okanye mhlophe. Ngelixa iphalethi enomdla ngakumbi ibandakanya iipopu eziqaqambileyo zemibala ebomvu, luhlaza okwesibhakabhaka okanye tyheli.
Sebenzisa izixhobo zekhaya lakho. Nokuba izitena, i-stucco, ukhuni okanye i-vinyl-ngendlela efanayo yokuba nganye yezi zinto ihambelana nombala othile, ayinakusebenza neminye imibala yomnyango wegaraji. Izitena, umzekelo, zinee-undertones ezifudumeleyo kwaye zisebenza kakuhle ngemibala emnyama kunye neetyebileyo yomhlaba njengentlabathi kunye ne-tan.
Sebenzisa ezinye izinto zokwakha ekhayeni lakho. Qiniseka ukuba ucango lwegaraji luhambelana kakuhle neefreyimu, iiwindow, iivali kunye nomnyango wangaphambili. Nangona kungacetyiswa ukuba umnyango wangaphambili kunye nomnyango wegaraji ubenombala ofanayo, oko akuthethi ukuba akufuneki bancedisane. Nangona kunjalo, kukho ukuxolelwa kulo mthetho njengoko izicelo zesiko ezininzi zihlala zipeyinta umnyango wegaraji, umnyango wangaphambili kunye nezivalo ngombala omnye. Ndwendwela eli phepha ngolwazi oluthe kratya malunga nokukhetha imibala engaphambili kwikhaya lakho.
Sebenzisa ivili lemibala. Yazi imibala embalwa yesiseko. Kuyanceda kakhulu ukuqonda ukuba ivili lombala lisebenza njani xa ukhetha umbala olungeleyo wegaraji yekhaya lakho. Ivili lemibala sisixhobo esilula sokuhombisa esetyenziselwa umyili ukwenza iphalethi yemibala ehambelanayo ebandakanya ucango lwegaraji kunye nezinye izinto ezibonakalayo kuyilo lwasekhaya. Jonga indibaniselwano yemibala emininzi efana nesikimu sombala esincedisayo, isikimu semibala efanayo, iskimu sombala we-monochromatic kunye nesikimu sombala ongathathi hlangothi.
Sebenzisa isitayile sakho. Ukukhetha umbala womnyango wegaraji ekhayeni lakho kubonelela ngeendlela ezingapheliyo zoyilo. Yazi ukuba zeziphi izinto ozikhethayo. Ngaba uyafuna ingxelo ephucukileyo? Emva koko ucango lwegaraji elimnyama okanye elimnyama oluhle kunokuba lilungele wena. Ngaba ufuna ukufudumala kunye nobutyebi? Emva koko jonga imibala yomnyango obomvu, omdaka kunye neorenji. Oku kuyinkohliso enkulu njengoko kufuneka uyenze lo gama ususa umbala oqaqambileyo.
Nazi ezinye izinto ekufuneka uzigcine engqondweni xa ukhetha umbala wegaraji ekhaya lakho:
Ngaba kufuneka udibanise okanye uthelekise? Ukudibanisa kukhetha umbala ongaphambukiyo kwibala lombala wendlu ngelixa umahluko ukhetha umbala ogqamileyo ukudala ubunzulu kunye nobukhulu kuyilo lwangaphandle lwekhaya lakho. Ukuba awufuni kuhoywa, thelekisa umnyango wegaraji kunye nayo yonke indlu yakho ukuze ubenobukeka obuhambelana.
Ukuba ufuna ukwenza ingxelo, sebenzisa umbala wombala ukongeza umdla onomdla kwindlu yakho. Zombini ezi ndlela zisebenza kakuhle ekukhetheni umbala wegaraji efanelekileyo kwikhaya lakho njengoko ulunika umlinganiswa owahlukileyo. Umzekelo, indlu emhlophe iyaqaqamba kwangoko xa umbala owahlukileyo usetyenziselwa ucango lwegaraji (umahluko), ngelixa ujongeka ubanzi kakhulu kwaye unomoya ukuba kusetyenziswa umnyango ofanayo wegaraji emhlophe (ukudibanisa).
Ngaba kufuneka upeyinte umnyango wegaraji umbala ofanayo nomnyango wakho wangaphambili? Impendulo nguhayi, kodwa kuxhomekeke kuwe. Ngamaxesha athile, imibala ehambelana nomnyango wegaraji kunye nomnyango wangaphambili ujongeka ulungile kwizicelo ezininzi. Nangona kungekho mthetho ungqongqo malunga noku, kuyinkolelo eyaziwayo ukuba ujoliso lwasekhaya kufuneka lube ngumnyango wangaphambili. Ukuba umnyango wegaraji nomnyango wangaphambili anombala ofanayo, utyekelo lokuba utsala ingqalelo kude nomnyango omkhulu wendlu.
Gcina umbala ogxininisayo kumnyango wangaphambili ukuze uwenze ube yindawo ekugxilwe kuyo endlwini kwaye uzame ukuthelekisa ucango lwegaraji kunye nezinye izinto zokwakha ezingaphandle kwendlu yakho njengezivalo. Umnyango wegaraji akufuneki ukhuphisane nomnyango wakho wangaphambili. Ukuba umnyango wakho wegaraji onombala onamandla obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, okanye otyheli, utsalela ingqalelo kude kubuhle bendlu yakho uqobo njengoko bunokuba bunzima kakhulu.
Ukudlala umdlalo wakho wegaraji. Enye impazamo yokuyila eqhelekileyo abaninimzi ekufuneka bayiphephe kukutsalela ingqalelo enkulu kumnyango wegaraji. Kwezinye iimeko, iba ngumceli mngeni kuyilo ngakumbi ukuba uyilo lomnyango wegaraji okanye isitayile asithandeki. Esona sisombululo sisiso onokuyenza apha kukudibanisa endaweni yokuthelekisa owona mbala ubalaseleyo wendlu.
Tshatisa iindawo ezifanele indlu yakho. Yintoni abanye abayenzayo nabangayenziyo ekufuneka uyigcinile engqondweni ukuze utshatise umnyango wegaraji kunye nezinye iindawo zendlu yakho? Okokuqala, umbala wakho womnyango wegaraji unokuba ngumbala ofanayo nowendlu yakho kodwa awukhuthazwa ukuba uhambelana ncam. Imijikelezo ejikeleze umnyango wakho wegaraji inokuba ngumbala ofanayo nomnyango wakho wegaraji okanye inokudibana nezinye izinto.
Gcina umbala omnye wombala. Abanye abaninimzi basebenzisa umbala owahlukileyo ukuqaqambisa iinkcukacha zomnyango wegaraji. Sebenzisa imibala emibini kumnyango wegaraji kukunika inkangeleko yokuphelelwa lixesha. Kwakhona, kunqande ukungqubana kwemibala: Njengomnyango wegaraji epinki, umnyango ongaphambili otyheli ngaphezulu kwendlu eluhlaza.
Cinga ngokujonga ngokubanzi kwendawo ohlala kuyo. Ngelixa ukuma ngaphandle kunokuba yindlela elungileyo yokwenza isitetimenti, ayilunganga into yokuwela ngaphezulu ngokukhetha umbala womnyango wegaraji ekhayeni lakho. Zama ukugcina imeko-bume engqongileyo kwaye uyisebenzise njengesikhokelo sokhetho lombala wegaraji.
Ukupeyinta umnyango wegaraji yenye yezona zinto zilula kwaye zitshiphu ezona zilungisiweyo ukukhulisa inkangeleko yekhaya lakho. Ngaphandle kokukhetha umbala ofanelekileyo kumnyango wegaraji, enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo yinkqubo efunekayo ukutshintsha umbala wayo. Umnyango wegaraji uthathwa njengeyona nto iphambili ekhayeni kwaye nakuphi na ukupeyinta okungafanelekanga kunokubangela isiphumo esingathandekiyo kwinkangeleko ngokubanzi ye-facade.
Nazi ezinye iingcebiso eziluncedo zokupenda umnyango wegaraji:
Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo lwepeyinti. Uhlobo lwepeyinti oza kuyisebenzisa luxhomekeke kudidi lwezinto zomnyango wegaraji yakho. Ipeyinti ekumgangatho ophezulu yelatex lolona hlobo lwepeyinti olufanelekileyo kuzo zonke izinto zomnyango wegaraji kodwa isebenza kakuhle ngenxa yentsimbi okanye iingcango zegaraji zealuminium. Isizathu sokuba ipeyinti ye-latex isetyenziselwe iiprojekthi ezininzi zokuphucula amakhaya kukuba kulula ukusebenza nayo kwaye yoma ngokukhawuleza. Ukongeza koku, ipeyinti ye-latex nayo iza ngokugqitywa okwahlukileyo, ukwahluka ukusuka kwiflethi, kwi-satin kunye nokugqitywa okuphezulu kwe-gloss.
Unokukhetha kwezinye izinto ezinje ngokugqitywa kokutya kweenkuni okujongeka njengokufana nepaneli yomthi. Ipeyinti ye-Acrylic latex icetyiswa ngamandla njengoko kungekho lungiselelo ludingekayo ngaphandle kokucoca kwaye ibambelela kakuhle kwizinto zomnyango wegaraji. Ipeyinti esekwe kwioyile yi-NO enkulu kwiminyango yegaraji kuba ibangela amagwebu kwisiphelo sokuqala okanye esele sikhona, ekugqibeleni sikhokelela ekuxobeni. Kwiingcango zegaraji zokhuni, qiniseka ukusebenzisa isilungiso ngaphambi kokufaka idyasi yombala wakho wepeyinti owuthandayo.
Kwakhona, ekuthengeni ipeyinti kumnyango wegaraji, khetha olona mgangatho ulungileyo onokulufikelela njengoko uhlawula ekuhambeni kwexesha. Iingcango zegaraji zihlala ziveliswa kwizinto zangaphandle kwaye zinotyekelo lokuphela, umhlwa okanye i-chip, ke qiniseka ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ukwenza ubungqina bmozulu.
izipho zomtshato ezivela kwintombazana ehloniphekileyo
Ukuchonga ubungakanani bepeyinti oyifunayo . Inani lepeyinti oya kuyidinga lixhomekeke kwizinto ezimbini, ubungakanani bomnyango wegaraji kunye nohlobo lwezixhobo zomnyango wegaraji yakho. Mkhulu kangakanani umnyango wegaraji oya kukunceda ufumane ubungakanani bepeyinti ngokusekwe kwindawo eqikelelweyo (kwisikwere sonyawo okanye imitha yesikwere). Oku kungabalwa kusetyenziswa imilinganiselo ethathiweyo kunye nefomula elula. Uhlobo lwezinto ezenziwe ngalo ludlala indima ebalulekileyo kuba ezinye izinto zithatha ipeyinti engaphezulu ukuyigubungela.
Ezona zinto zixhaphakileyo kumnyango wegaraji ngumthi, intsimbi, ialuminiyam, ukudityaniswa kunye nefilglass. Umzekelo, umnyango wokhuni udinga ipeyinti engaphezulu ukuze ugqunywe xa kuthelekiswa nomnyango wealuminium. Ukongeza kuloo nto, ukuba uhamba ngokukhanya komnyama okanye mnyama, unokufuna ipeyinti engaphezulu, ngokuchaseneyo nokuphinda ucofe ucango lwegaraji ngombala ofanayo okhoyo. Ukujonga izibonelelo zokuphinda usebenze kwakhona kunye nenani elaneleyo lokugubungela ucango lwegaraji liphela, kukhuselekile ukuthenga igaloni epheleleyo yombala owuthandayo.
Cinga ixesha elifanelekileyo. Imiba yokubeka ixesha! Ukuthatha isigqibo sokuba upeyinte nini umnyango wegaraji kufuneka ucingisiswe ngononophelo nawo. Imanzi, ingqele eqhaqhazelisa amazulu kunye nexesha elishushu asiloxesha elifanelekileyo lokupeyinta umnyango wegaraji. Ipeyinti ifuna ubushushu obufanelekileyo ukuze yome kwinqanaba elilelona lilungileyo, kungenjalo iya kujongeka iqhekekile okanye iphelile. Uhlobo lwezinto zomnyango wakho wegaraji luphendula nakwimozulu ethile. Iingcango zegaraji zeAluminiyam, umzekelo, ziyanda kwaye ziyatshintsha xa kushushu kakhulu, ngenxa yoko kufuneka ipeyinti engaphezulu.
Thatha amalungiselelo ayimfuneko. Ngaphambi kokupeyinta umnyango wegaraji, kukho amanyathelo aliqela ekufuneka enziwe ukulungiselela umphezulu wawo. Oku kuyakuqinisekisa umbala ohlala ixesha elide. Lungiselela umnyango wakho wegaraji ngokucoca ipeyinti endala usebenzisa ibhloko yesanti. Umnyango wegaraji eyenziwe ngomthi kufuneka ucwecwe ngokupheleleyo. Coca umphezulu womnyango wegaraji yakho ngokusebenzisa ishawuli yoxinzelelo okanye ilaphu ngesepha ethile kwaye uyivumele ukuba yome.
Nika ingqalelo icandelo elisezantsi kuba kulapho kuhlala khona ukungcola. Jonga iihenjisi kunye nezixhobo zehardware kwaye usebenzise isitywina, xa kufuneka, ukubakhusela kurusi. Ukucoca linyathelo elibalulekileyo kuba ukuba umphezulu awukhululekanga luthuli, ubumdaka kunye nokungcola, kukho umkhwa wokupeyinta ukuhambelana ngokungalunganga kumphezulu womnyango wegaraji.
Iingcebiso zokupeyinta. Nazi izinto ezenziwayo nezingenziwayo zokupenda iingcango zegaraji:
• Sebenzisa iphepha lokuqala. I-primer iyafuneka xa upeyinta iingcango zegaraji zokhuni okanye ukuba utshintsha umbala womnyango wegaraji okhoyo ukusuka ebumnyameni ukuya ekukhanyeni. Sebenzisa i-latex based primer ukuba ipeyinti yakho yi-latex. Khetha uhlobo olufanelekileyo olulungele umphezulu womnyango wegaraji.
• Tepa yonke imiphetho. Sebenzisa i-masking tape ukugubungela imiphetho kunye nokuthintela ukubetha kwepeyinti ekuphumeni kwemida.
• Gcina ucango lwegaraji luvulekile xa uphakathi kokupeyinta uze uqale ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Kwiminyango yegaraji enoyilo lwepaneli efihliweyo, qala kwikona yenxalenye ekhawulezileyo.
• Qaba ipaneli enye ngexesha. Sebenzisa izikhombisi ezinde kunye nemivimbo emide ecothayo ngexesha lokufaka.
• Musa ukungxama. Ngaphambi kokufaka idyasi yakho elandelayo yepeyinti, qiniseka ukuba idyasi yakho yokuqala yome kuqala.
• Sebenzisa uhlobo oluchanekileyo lokufaka ipeyinti. Ngaphandle kokusebenzisa isiguquli sokupenda, ukupeyinta umnyango wegaraji kungenziwa ngokusetyenziswa kwebrashi yepeyinti okanye ibrashi yokuhambisa. Ibrashi ye-roller iqinisekisa umbala oqinileyo ngelixa ibrashi yepeyinti eshinyeneyo ilungile ukuba ufuna ukubonisa imivumbo yebrashi.
Iingcango zegaraji eziBlue zizisa umbala ovakalayo osesikweni kwindlu engaphandle kokuba ingoyiki kakhulu okanye ingabi namandla. Ayothusi njengombala ubomvu, kodwa inokubonisa nendlu yakho. Iingcango zegaraji zetiyali zizisa umbala ohlaziyayo ngelixa iingcango zegaraji eziluhlaza zisebenza njengenye indlela emnyama.
Iingcango zegaraji eziBlue zisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokwakha. Ngokubanzi, iingcango zegaraji ezinkulu zilungile kumdlalo wezindlu ezineetoni, ngakumbi ezo zinamatye okuhombisa aluhlaza okwesibhakabhaka. Ezinye izicelo zezi: umnyango wegaraji eblue blue usebenza kakuhle kunye nendlu ebomvu yezitena ebomvu, ngelixa ucango lwegaraji oluhlaza oluhlaza luhlangana ngokudibeneyo kwindlu epholileyo engwevu. Iingcango zegaraji eziBlue zikhangeleka zithandeka ngakumbi xa zidityaniswe nezinto ezimhlophe ezimhlophe.
Iingcango zegaraji ezimnyama eziluhlaza zibonelela ngesandi sokungathathi hlangothi kweli khaya liphefumlelweyo ngokwesiko. Idityaniswe namatye endalo e-beige kunye nophahla lwe-shingle brown, imibala ehambelana nomnyango wangaphambili kunye neengcango zegaraji zizalisekisa umphandle weli khaya.
Umbala womnyango wegaraji ungowokufana ngqo nengaphandle elingumbala oluhlaza oluhlaza kweli khaya laseMelika lendlela. Ubuhle bokuba nombala ofanayo kukuba kunika i-facade yendlu ukubonakala ngakumbi.
Umbala opholileyo walomnyango wegaraji yeti ngumbono ohlaziyayo wangaphandle kwendlu emhlophe.
Umbala obomvu uletha ubunzima kumlinganiswa wasekhaya. Yenza umbono oqinileyo kwaye ikhuphe imvakalelo yokwamkela. Iingcango zegaraji ezibomvu zizinto ezibonakalayo ezibonakalayo ezihambisa ingqalelo kude nendlu. Lo ngumbala ofanelekileyo ukuba ufuna ukwenza umnyango wegaraji uphume kwezinye izinto zekhaya lakho.
Ngaphandle kobomvu obomvu obomvu kunye nomlilo obomvu, kukho iindlela ezinqabileyo ezinje nge-burgundy kunye ne-maroon esebenza kakuhle ngemibala yomnyango wegaraji yezindlu zesintu. Iingcango zegaraji ezibomvu zisebenza kakuhle ngokungathathi hlangothi (mhlophe okanye beige) kunye nomhlaba ongaphandle. Kwizicelo zale mihla nezintsha, umnyango wegaraji ebomvu unokusetyenziselwa ukongeza umbala wenqanawa kwizindlu ezimthubi okanye eziluhlaza.
Iingcango zegaraji ezibomvu ziingxelo ezinesibindi ezinokuthi ngokuqinisekileyo zenze nayiphi na indlu ivele. Imibala eyahlukileyo yemigca emhlophe kunye nemifuno eluhlaza yenza umbala wayo oqaqambileyo uphume ngakumbi.
Olu cango lwegaraji lubomvu lubonakala njengokukhanya kwenqanawa yezitena ezinemibala e-tan, uphahla lwe-terracotta emdaka kunye ne-trim ezimhlophe. Isikimu sombala wale ndlu yangaphandle sifudumele kwaye sinomdla ngokubonakalayo.
Ingwevu ithathwa njengendawo engathathi cala kwindawo yoyilo. Umbala ogqibeleleyo wabanini bamakhaya abakhetha ukungathathi cala kodwa abangakuthandi ukubamhlophe okumhlophe kwaye abanako ukuzibophelela kubunzulu bamnyama. Omnye umbala ongapheliyo osebenza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo.
Iingcango zegaraji ezingwevu zilungele amakhaya anamhlanje nalemihla angenazo iiphalethi. Ikwasebenza kakuhle kwizindlu ezinezitayile ezisesikweni. Ukuba ufuna ukongeza isandi esifihlakeleyo ngaphandle kwendlu yakho, umnyango wegaraji ongwevu unokunika amandla athe cwaka. Kukwakulunge kakhulu ukulungelelanisa inkangeleko yangaphandle emnyama. Obunye ubuhle bokukhetha umbala ongwevu kwiingcango zakho zegaraji kukuba ungahamba umnyama okanye ukhanyise, kuxhomekeke kukhetho lwakho.
Umbala othambileyo ongwevu opholileyo okanye opholileyo ngumbala ogqibeleleyo womnyango wegaraji njengoko udibana kakuhle nawo nawuphi na umbala wangaphandle.
umde kangakanani umsitho womtshato
Ukomelela okuzolileyo komnyango wegaraji embala ungwevu kufanelekile kwizikimu zemibala ye-monochromatic njengoko ibonelela ngombala ocacileyo kwaye awuphambuki kakhulu ekungathathi cala. Lo mnyango wegaraji ungwevu udibanisa ngokuvisisanayo umhlophe kule ndlu yanamhlanje yangaphandle, uphahla olumnyama olumnyama, amatye okuhombisa endalo kunye nezicwili ezimhlophe.
Iphalethi yombala ongathathi hlangothi yale garaji, yenziwe ngophahla olumnyama olumnyama, i-ash stucco enemibala kunye neentsimbi ezimhlophe, ilungile kwiminyango egaraji engwevu. Ubuqili kunye nokuthotywa, ezi ngcango zingwevu zimbini zisebenza njengombala odibeneyo wombala wokujonga okusesikweni kwale facade.
Umbala oluhlaza ugqibelele ukuba ufuna iimpawu zangaphandle kwekhaya lakho zidibane nendalo esingqongileyo kunye neendawo ezintle. Iingcango zegaraji eziluhlaza zilungele ukudala ibhalansi ngelixa usongeza umahluko othulisiweyo kumakhaya angathathi cala. Lo mbala womnyango wegaraji usebenza kakuhle kwizindlu ezimdaka ngombala kwaye uyindlela engekhoyo kwiiplette zangaphandle ezinombala othile. Iingcango zegaraji eziluhlaza zikwangumbala ohambelana nezindlu zezitena ezibomvu.
Imibala eyahlukeneyo eluhlaza yenza ezi zindlu zangaphandle zihlaziye kwaye zikhangeleke ngokwendalo. Umnyango wegaraji onemibala yomnquma wahluke ngokupheleleyo kumnyango ongaphambili obomdaka ngombala kodwa ikwangumbonisi ogqibeleleyo wepeyinti esecaleni kunye neesage shingles.
Lo mnyango wegaraji eluhlaza wongeza umbala opholileyo kumbala we-beige kunye nomdaka weli lizwe. Iingcango zegaraji eziluhlaza zidibanisa kakuhle kunye neendawo ezijikelezileyo njengoko zivusa imvakalelo yendalo kunye nendalo.
Njengombala omhlophe nomhlophe, umnyama ukwathathwa njengomnye umbala ongapheliyo. Umnyango wegaraji emnyama awuphumi ngesitayile kwaye uhambisa ubunono kunye nobuhle ekhayeni. Yeyona hue ifanelekileyo yokujonga ukuba ufuna ukwenza umahluko osesikweni kwimbala ekhanyayo yangaphandle.
Iingcango zegaraji ezimnyama zithandwa ngakumbi kwizitayile zekhaya elitsha, ezinombala oluhlaza okwesibhakabhaka omnyama njengomthunzi omtsha oqhelekileyo ohlaziya ukubonakala kwekhaya. Kwizicelo zesiko, iingcango zegaraji ezimnyama zejethi zilunge ngakumbi njengoko zinombala oqinileyo. Iingcango zegaraji emnyama nazo zikhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukwenza ingxelo ebhalwe ngqindilili kodwa ufuna ukuphuma kwimibala ecacileyo enjengobomvu, tyheli, bhlowu kunye noorenji. Ijongeka intle ingakumbi kumakhaya ezitena.
Isibonelelo esinye sokuba nomnyango wegaraji emnyama kukuba ufihla ubumdaka ngcono kunemibala ekhanyayo efana nomhlophe okanye beige. Nangona kunjalo, icala layo eliphantsi kukuba linokubonakala ngathi linokuphazamiseka xa lingenziwanga ngendlela efanelekileyo.
Misa ngokuchasene namatye endalo eetoni zomhlaba ezahlukileyo, lo mnyango mhle wegaraji unika ubuchule kweli khaya langoku. Iingcango zegaraji ezimnyama zikwanikezela ngenkangeleko engapheliyo eya kuhlala iminyaka.
Lo mnyango wegaraji emnyama ujongeka umhle kwaye unodidi ngokuchasene nengaphandle le-beige kweli bali lamabini lasekhaya laseMelika. Umbala oqinileyo kodwa ogciniweyo omnyama luphawu olugqwesileyo lwezindlu ezisemthethweni njengoko zingenabunzulu xa kuthelekiswa nemibala eqaqambileyo.
Umhlophe ngowona mbala uthandwa kakhulu kwiingcango zegaraji. Kuthathelwa ingqalelo njengombala wobungqina osilelayo kuyilo, iingcango zegaraji ezimhlophe zisebenzela nasiphi na isitayile sangaphandle nokuba ingaba siko ngokwesiko, langoku okanye langoku. Iingcango zegaraji ezimhlophe zikwabonelela ngokuguquguquka kunye nokusebenza ngokuchaseneyo xa kufikwa kuthelekiso neminye imibala yangaphandle yendlu. Isebenza kakuhle ngokukhanya kunye nomnyama ongaphandle kwaye ilungile ekudaleni zombini ukudibanisa nokungafani. Ikwayikhetho lakudala elingenamda kumbala womnyango wegaraji njengoko kuqinisekisiwe ukuba awusoze uphume ngesitayile kwithuba elide.
Umbala oqaqambileyo, ococekileyo weengcango zegaraji ezimhlophe nawo unegalelo kumoya ococekileyo ezindlwini. Xa ibekwe ngokuchasene nengaphandle elingaphandle, ikhawuleza ikhanyise i-facade. Ngelixa ibekwe ngaphandle ngaphandle, umnyango wegaraji emhlophe wenza indlu ibonakale inkulu. Nangona kunjalo, enye yeengxaki zayo kukuba ithambekele ekuboniseni amanqaku ngokulula ngakumbi xa ithelekiswa neminye imibala emnyama, yiyo loo nto ifuna umgudu ongakumbi malunga nolondolozo.
Iingcango zegaraji ezimhlophe zikwayinto eyintandokazi kumakhaya emveli aseMelika okanye amakholoniyali, kodwa uguqulelo oluhlengahlengisiweyo ngakumbi lukwakhona kwizindlu zangoku zincinci.
Eli khaya libini lendabuko linengubo engwevu, izinto ezimhlophe ezimhlophe, umnyango omnyama ongaphambili ucango lwegaraji emhlophe. Ubukhosi bombala omhlophe ovela kwigaraji bucoca umoya ococekileyo nomoya kweli khaya.
Iingcango zegaraji ezimhlophe azisebenzi kuphela kumakhaya aphefumlelweyo emveli kodwa nakumakhaya ohlobo lwangoku. Le ndlu yamabali mabini inombala oluhlaza ongwevu oqaqanjiswe ngamatye okuhombisa anemibala kunye neminyango egaraji emhlophe emhlophe.
Iingcango zegaraji zeBrown, nokuba zipeyintiwe, zinamabala okanye zilingisiwe njengokhuni, zizisa indalo kwindalo yasekhaya. Le hue izisa ukufudumala kunye nengxelo ehlaziyiweyo kwizinto zangaphandle.
Iingcango zegaraji eziBrown ziza kwiithoni ezikhanyayo ezahlukeneyo kunye neminyango emnyama. Iingcango zegaraji ezenziwe ngokhuni zinobuhle bendalo obonisa iinkozo ezintle kunye nemibala etyebileyo. Zijongeke zibiza kakhulu, ngakumbi iingcango zegaraji ezimdaka. Ezinye izinto zomnyango wegaraji zilinganisa ukubonakala kweenkuni nazo kwaye zinobuntu bazo. Icebo lokusebenzisa iingcango zegaraji emdaka kukukhetha umthunzi ofanelekileyo wombala omdaka ukuze uhambe nephalethi yangaphandle yekhaya lakho.
Iingcango zegaraji eziBrown zisebenza kakuhle kwizinto zangaphandle nangokwesiko. Olu lukhetho lwakho olufanelekileyo ukuba ufuna ukufaka iskim se-monochromatic kwikhaya lakho njengoko umdaka usebenza kakuhle xa udityaniswe neetoni zomhlaba kunye nemibala yesanti.
Iphalethi yeli lizwe likhaya kukulingana kweetoni ezifudumeleyo nezingathathi hlangothi, ezenziwe ngombala otyheli, izinto ezimhlophe ezimhlophe, uphahla oluphuzi olupholileyo kunye neminyango engaphambili emdaka kunye negaraji. Lo mnyango wegaraji emdaka ubonelela ngombala ovakalisiweyo othulisiweyo kwi-facade.
Eli khaya libonisa umnyango omnyama wegaraji kwindlu engwevu yanamhlanje ene indlela yokuhamba ngamatye .
Eli khaya lihonjisiweyo linegaraji ezintathu zeemoto kunye nomthi we-teak omdaka ophekiweyo ngomthi ofanayo osetyenziselwa iinkcukacha zokwakha zekhaya ezifana nocingo lwazo lwamatye kunye neentsika zenkxaso. A indlela yala maxesha yakhiwe ngokudibanisa iipavumente kunye nemimoya ukuya emnyango wokungena ekhaya.
Ukusuka kwiithowuni ezi-cream ze-ecru, ezimhlophe, i-almond, i-oatmeal kunye ne-khaki ukuya kwi-shades ethulisiweyo, iingcango zegaraji ze-beige zezona zikhethiweyo kumakhaya emveli. Le hue ethambileyo
Iingcango zegaraji ze-Beige zihambelana ngokugqibeleleyo nemibala efudumeleyo. Xa isetyenziselwa indlu enezitena zangaphandle ze-beige, umnyango wegaraji we-beige ufihla igaraji kakuhle ngokudibanisa ngokuhambelana nephalethi yendlu.
Umbala ofudumeleyo oshushu wale ndlu ingaphandle eligqibeleleyo lezinto zokwakha ezinemibala efana nomnyango wegaraji ye-beige, iiposti zamatye angwevu kunye nophahla lwe-shingle engwevu. Umbala owoyisiweyo womnyango wegaraji ukwahlula ukukhanya kombala otyheli we-canary, usenza ukubonakala okuhlaziyiweyo kwale facade kusemthethweni.
Umnyango wegaraji etyheli uzisa into ehlaziyayo kunye neqaqambileyo ekhayeni lakho. Enye inketho efanelekileyo ukuba ufuna ukuba igaraji lakho libe yindawo ekugxilwe kuyo. Oku kuzisa ukukhanya okukhanyayo kwibala lekhaya lakho kwaye kunokwenza indlu yakho ibonakale. Umbala womnyango wegaraji usebenza kakuhle ngaphandle kwendlu eluhlaza. Iithoni ezimthubi ezithambileyo zinokuzisa umahluko ophantsi ngelixa i-shades eqaqambileyo enjengomsebenzi otyheli we-canary kwizikimu zemibala ezinesibindi. Icebo lokusebenzisa umnyango wegaraji etyheli kukuwucaphukisa ngokungathathi cala ukunciphisa amandla alo.
Le ndawo iphambili eluhlaza inombala oqaqambileyo otyheli wegaraji nomnyango wangaphambili osebenza njengendawo enomdla kweli khaya. Iindwendwe ngokuqinisekileyo ziya kuziva zi-cheery ngokujonga nje umbala okhanyayo ofudumeleyo.
indlela yokufaka iqhina
Umbala weorenji wongeza imfudumalo kwizinto zangaphandle zekhaya. Lo mbala uchukumisayo womnyango wegaraji ukwenye into yokubamba iliso kwaye kufanelekile ukuba ufuna ukuba umnyango wegaraji ube yenye yezona zinto ziphambili ekhayeni lakho. Nangona kunjalo, lo mbala unokudibanisa kunye nezitena zetera cotta. Iingcango zegaraji ezi-orenji azicacanga xa zidityaniswe nezinto zangaphandle zomthi kunye neetoni zomhlaba. Izimvo zombala wegaraji yeorenji ziya zifumana ukuthandwa njengoko umbala usetyenziswa rhoqo mva nje kwiminyango engaphambili.
Lo mnyango wegaraji leorenji uhambisa imvakalelo efudumeleyo yokuzibandakanya kwimbala engumbala we-terra cotta weli khaya linamabali amabini. Imiswe kwindawo enemibala, le ndlu igqume ngokwendlela yayo eyahlukileyo ebonakaliswa sisikimu sombala weorensi enomhlwa.
Umbala ocebileyo omnyama womnyango wegaraji emfusa unika indlu ubukhazikhazi bobukhosi. Ukuba ufuna umbala ocacileyo wendlu yakho, oku kunokuba yinto efanelekileyo kuwe. Iingcango zegaraji ezimfusa zifana nezangaphandle ezingwevu kwaye zikwangumbala womnyango wegaraji othandwayo wezindlu zezitena ezibomvu. Lo mbala ukwasebenza kwizimbo zesiko nezangoku.
Eli khaya lithandekayo ngokwesiko likhangeleka ngathi liphuma nje kwincwadi yamabali. Umnyango wegaraji emfusa wongeza umnxeba onomtsalane kunye nobuhle beklasikhi kwizinto ezingathathi hlangothi nakwimibala emhlophe. Iphalethi emnandi ethambileyo yale ndlu ikwavelele ngokuchasene negadi enombala ojikelezayo.
Lo mnyango wegaraji umnyama utyebileyo wegaraji uzisa into ebonakalayo ebonakalayo kule garaji ngaphandle kwezitena ezingwevu. Izisa nje isixa esifanelekileyo sokomeleza ukuthoba ubume bokwakheka kwale facade.
Imibala yelitye lentlabathi iqulethwe kunye neetoni zomhlaba ezithulisiweyo- imibala edla ngokusikhumbuza umhlaba kunye nomhlaba. Lo mbala ufana nomthunzi ophakathi phakathi okumdaka, ngwevu-uhlobo olufana ne-taupe. Imibala yelitye lentlabathi ithathwa njengokungathathi cala okungapheliyo okuzisa uxinzelelo kunye nobushushu kwindlu yangaphandle.
Umnyango wegaraji yelitye lentlabathi yenye indlela eya kwi-beige nomdaka. Lo ngumbala womnyango wegaraji oguqukayo kuba unokusetyenziselwa ngaphandle nangokwesiko, ngakumbi abo banombala wephalethi omnyama wetoni.
Iingcango zegaraji zeSandstone ezinemibala ehambelana nezinto zokwakha ze-beige zeli khaya liluhlaza grey. Iphalethi eguqukayo yale yangaphandle iyonwabile ukujonga njengoko inomtsalane ozolileyo kunye nohlaziyayo kuwo.
Indlu enye eboniswe apha ngasentla kodwa kuphela ngokukhanya okufudumeleyo okukuyo-eli khaya libukeka licolile njengoko ixesha lobusuku lisondela kuba iithowuni ezifudumeleyo ziphuma kwindawo engathathi hlangothi. Kulo mfanekiso, sikwabona ukuba iingcango zegaraji zelitye lentlabathi zijongeka njani ngokwahlukileyo ekuphenduleni ukukhanya kwendalo kunye nokukhanya.
Isipho seminyaka esi-9 kuye
Nangona izitena zihlala zisetyenziselwa izindlu zangaphandle, ukukhetha umbala ofanelekileyo wolu hlobo lwangaphandle akuphelelanga kwimibala eqhelekileyo. Izitena zizinto ezinokubhetyebhetye ngokokuhambelana kombala. Ngelixa kungekho zitena zibomvu zibomvu kwaye kungekho zitena zimdaka ngombala zimdaka, iindidi zemibala efudumeleyo kunye neephantsi zivumela abanini makhaya ukuba benze ukuvumelana okanye umahluko kuyilo. Kungakhathaliseki ukuba ukhetha ntoni, zombini iindlela zinika indlu yakho isitayela kunye nesimboli.
Ukukhetha umbala wegaraji elungileyo kwindlu yezitena kuxhomekeke ekubeni ufuna ukudibanisa okanye ukwahlula. Isiphumo esihambelanayo senziwe ngokukhetha umbala omnye kumthunzi wezitena emva koko usebenzisa loo mnyango wegaraji. Ukwahluka, kwelinye icala, kufezekiswa ngokwahlula umbala kumnyango wakho wegaraji kwizitena.
Izitena ezibomvu zihlala zinobushushu obufudumeleyo obomvu, iterracotta, irusi e-orenji, tyheli, umbala omnyama, omdaka, okanye ongathathi hlangothi okwekhrimu, umbala ongwevu kwaye ngamanye amaxesha ukubonakaliswa kwebala eliluhlaza. Izitena eziBrown zinetoni yomhlaba engathathi hlangothi kunye nemibala eyahlukeneyo yesanti. Le mibala isisiseko inokusebenza njengesikhokelo sokukhetha umbala ofanelekileyo wegalaji yekhaya lakho.
Isitshixo sokwenza isikimu semibala ehambelanayo phakathi komnyango wegaraji kunye nendlu yezitena kukukhetha umbala odibana nombala wezinto zangaphandle. Khetha ilizwi eliphantsi kwaye unamathele kulo. Imibala inokuhlengahlengiswa ngokuhamba ngokukhanya komthunzi okanye mnyama. Inkqubo efihlakeleyo yombala inokufezekiswa ngokusebenzisa isithunzi esityebileyo sesinye sezitena ngelixa umbala ongqindilili unokufezekiswa ngokusebenzisa ithoni emnyama. Sebenzisa le ndlela kuya kudibanisa umnyango wegaraji kunye nendlu yakho yonke. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwalathisa ugxininiso kumnyango wegaraji yakho, ke umahluko yeyona nto ukubheja kwakho. Ukukhetha umbala osebenza njengesandi kunokuzisa ubunzulu kunye nobukhulu kwimbonakalo yendlu yakho xa iyonke. Umahluko unokufezekiswa ngokusebenzisa isikimu esincedisayo esisekwe kwivili lombala- umzekelo, izitena ezibomvu zinokutshatiswa nomnyango wegaraji eluhlaza othulisiweyo.
Indlela yoyilo lwekhaya lezitena nayo inokuthi ithathelwe ingqalelo xa ukhetha umbala womnyango wegaraji. Isikimu sombala wemveli esihamba ngakumbi sithintela ukungathathi hlangothi njengegrey, emhlophe kunye nomnyama. Iphalethi yanamhlanje ivula iinketho ezininzi ezinomdla njenge teal, purple okanye navy blue. Kwakhona, sukuhamba ngombala womnyango wegaraji ongqubana nombala wezitena okanye ucango lwangaphambili. Umzekelo, indlu ebomvu yezitena ayihambelani kakuhle nomnyango wegaraji otyheli othusayo.
Yeyiphi eyona mibala mihle yegaraji yendlu yezitena? Izitena ezibomvu, i-brown, mahogany kunye ne-walnut ziintandokazi zeklasikhi. Iingcango zegaraji emnyama zihonjisiwe kwaye zinika umahluko osesikweni. Abanye abangathathi hlangothi njengegrey, emhlophe kunye ne-beige nazo zikhetho ezintle zesibini. Ukuze ubhenele ngakumbi ngeli xesha, yiya kwimibala eyahlukileyo enjengomthunzi othulileyo oluhlaza, ohlaza okwesibhakabhaka kunye nemfusa etyebileyo. Sukuya kwimibala ejijekileyo njengoko inamandla kakhulu kwaye inokuphelela ekubeni sisiphithiphithi esibonakalayo xa ibekwe ngokuchasene neepateni zokudibanisa izitena.
Kwizitena ezimdaka, sebenzisa iingcango zegaraji ezinemibala efana nesandstone, brown, taupe kunye neenkuni ezigqityiweyo. Izinto ezingaphandle kwendlu kaBrown lithuba elifanelekileyo lokufaka umbala wombala we-monochromatic. Ukungathathi hlangothi okuqhelekileyo njengamnyama, i-beige kunye ne-grey epholileyo nazo zikhetho ezifanelekileyo.
Lo mnyango wegaraji emnyama omnyama wongeza into yoyilo olwahlukileyo kwizitena ezimdaka ngombala. Imibala ehambelana nophahla lwethayile, iifestile, iingcango zangaphambili kunye neengcango zegaraji zidibanisa inkangeleko yeli khaya.
Ukukhetha umbala womnyango wegaraji ongumbala ofanayo nowangaphandle kwendlu uthathwa njengenye yeendlela zesiko kuyilo lwasekhaya. Ukongeza koku, uninzi lwabayili kunye nabanini bamakhaya bakuthathela ingqalelo oku njengefomula yokungqina kubungqina beephalethi zombala ongaphandle.
Umnyango wegaraji ohambelana ncam nombala wangaphandle wendlu awutsali ngqalelo kumnyango wegaraji. Isikhokelo sokuyila esiphambili ekukhetheni imibala yomnyango wegaraji kukuzoba ingqalelo encinci. Oku kufanelekile ukuba ufuna ezinye izinto zoyilo zijolise ekhayeni lakho. Oku kukuvumela ukuba uvumele umnyango wakho wangaphambili ume ngelixa ezinye izinto eziphambili zendlu zidibanisa. Ngaphandle kwalonto, isibonelelo esinye sale ndlela yoyilo kukuba yenza indlu ibonakale inkulu, njengoko kusetyenziswa imibala embalwa kwaye ukuqhubeka kwenkqubo kuyalandelwa.Umzekelo, amakhaya angathathi hlangothi akhangeleka eqaqambile kwaye emakhulu xa ehambelana ne-beige okanye iingcango zegaraji ezimhlophe.
Ukupeyinta umnyango wegaraji imibala efanayo necala lendlu yakho ikwajongwa njengembonakalo yeklasikhi engaphantsi enokuthi ihlale iminyaka-nangona yesiko, ayiphelelwe lixesha. Isisisombululo esifanelekileyo kwizindlu ezineminyango engathandekiyo yegaraji kunye nezitayile njengoko isebenza njengendlela yokufihla eso siphoso. Ukuba umnyango wakho wegaraji uhambelana nekhaya lakho, ngoko amehlo awajoliswanga kuwo.
Lo mnyango wegaraji uhambelana ne-beige sidings yeli khaya lesiqhelo. Ukongezwa kocango lwangaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka kudala into ebonakalayo ebonakalayo. Iingcango zegaraji ezinombala ofanayo nendlu zenza ukuba ii-facade zibonakale zinkulu. Siyathemba ukuba le galariya yemibono yeminyango yomnyango wegaraji yayiluncedo kwaye yakunika inkuthazo eninzi yokupenda umphandle wekhaya lakho.
Ukongezwa kombala okhuthazayo jonga kwiphepha lethu malunga umbala wepeyinti ababonisi ukukunceda ufumane umthunzi olungele isitayile sekhaya lakho.
ixesha eliqhelekileyo lokuzibandakanya
Amagumbi okuhlambela aneebhafu zeenyawo
udonga lwe-brown accent
Iindleko zomtshato ezilinganiselweyo ngomntu ngamnye
inkosazana umtshakazi uthando lokwenene quote